The Role of Accounting - Business Centric Network (BCN)
?စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ(Accounting) ဆိုတာ တကယ်တမ်းကတော့ ?စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ (Business) ရဲ့ဘာသာစကား တစ်ခုပါ။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လုပ်ငန်းရဲ့ ??ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှု အခြေအနေကို လုပ်ငန်းနဲ့ ပါတ်သတ်နေတဲ့ သူအားလုံး(Stakeholders) နဲ့ လုပ်ငန်းအကြားမှာ ဆက်သွယ်ရေးမှာ မရှိမဖြစ် ?အရေးပါတဲ့ အရာ တစ်ခုမို့ပါပဲ။
Accounting ၏ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ?‍?‍?‍?stakeholders များအနေဖြင့် ?ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြုကာ ?ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ပြီး ?တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်လာအောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရာမှာ ✔️အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
?တိကျမှုမရှိဘဲ၊ အချိန်နှင့် တပြေးညီ မဟုတ်တဲ့ ?ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကိုအခြေခံပြီးတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လုပ်ကိုင်ဖို့ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံလုပ်ဖို့ ⛔မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူး။
?အထူးအရေးကြီးတာကတော့ ?ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ဆိုတာ ?‍?‍?‍?Stakeholders များနဲ့ ?Business အတွက် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ? ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးမည့် အရာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
?ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ?သတင်း?အချက်အလက်များ ဖော်ပြဖို့အတွက် ပထမဦးစွာ လိုအပ်သော အချက်အလက်များ စုဆောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့သည်လိုအပ်သော? အချက်အလက်များ စုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းက အလွန်ပဲလွယ်ကူပါတယ်။
စုဆောင်းထားတဲ့ ?အချက်အလက်များကို တန်ဖိုးရှိတဲ့ ?ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများအဖြစ်ဖော်ပြဖို့အတွက်ကတော့ အချိန်ပေးရပါမယ်။
စာရင်းအင်းနဲ့ မရင်းနှီးသူများ အတွက် အနည်းငယ်ခက်ခဲ၊ လက်ဝင်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့တာကြောင့် စာရင်းပိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာ စာရင်းကိုင် စနစ် လိုအပ်ပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ စာရင်းကိုင် စနစ်ဆိုတာကတော့ ?အချက်အလက်များကို နေ့စဉ် ထည့်သွင်းပေးလိုက်တာနဲ့ လိုအပ်သော ?ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများကို လွယ်ကူစွာ ထုတ်ပေးနိုင်အောင် ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များက စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် အညီ ကြိုတင်ရေးဆွဲထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ဒီလိုစနစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီးတော့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ အစီရင်ခံစာများကို ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ ?‍?စာရင်းပိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် ရှိပြီလား။ ကွန်ပြူတာ စာရင်းကိုင်စနစ်ရှိပြီလား။
Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books (Cloud Based Accounting Software) ကိုသုံးကြည့်လိုက်ပါ။
☺️လွယ်ကူတယ်၊ ရိုးရှင်းတယ်၊⏲️ အချိန်၊ ?နေရာ၊ ?ဒေသမရွေးကနေ အသုံးပြုနိုင်တယ်။
စတင်အသုံးပြုဖို့ အတွက် ?ရှင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အများကြီးသုံးဖို့မလိုဘူး။
?ကွန်ပြူတာ နဲ့ internet connection ရှိတာနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုခအနေနဲ့တော့ လစဉ် ? မြန်မာငွေ ၃၀,၀၀၀ ကျပ် ပဲကျသင့်ပါတယ်။
မြန်မာငွေနဲ့မို့ Exchange Rate တက်မှာ ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
သုံးပြီးမှ အဆင်မပြေလို့ ?စိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူး။
အရင် အသုံးပြုကြည့်ပြီးမှ ?ကျသင့်ငွေပေးချေရမှာဖြစ်လို့ မကြိုက်လို့ပြန်မအမ်းမှာ?စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
MSME Booksကို ?သုံးဖြစ်အောင်သုံးကြည့်လိုက်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့ကို ?ကူညီပေးဖို့ Business Centric Network မှ ?‍?ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အဆင့်သင့် စောင့်ကြိုနေပါတယ်။
သီတင်းကျွတ်အထူးPromotion အနေနဲ့ အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်မတိုင်မီ 5️⃣ 0️⃣ ရာခိုင်နှုန်းအထိ Discount ရှိတာမို့ အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
?09977160671(viber ကလဲ တဆင့်လဲ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။)
?စာရငျးအငျးပိုငျးဆိုငျရာ(Accounting) ဆိုတာ တကယျတမျးကတော့ ?စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား (Business) ရဲ့ဘာသာစကား တဈခုပါ။
ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ လုပျငနျးရဲ့ ??ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာစှမျးဆောငျမှု အခွအေနကေို လုပျငနျးနဲ့ ပါတျသတျနတေဲ့ သူအားလုံး(Stakeholders) နဲ့ လုပျငနျးအကွားမှာ ဆကျသှယျရေးမှာ မရှိမဖွဈ ?အရေးပါတဲ့ အရာ တဈခုမို့ပါပဲ။
Accounting ၏ရညျရှယျခကျြကတော့ ?‍?‍?‍?stakeholders မြားအနဖွေငျ့ ?ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျကို အသုံးပွုကာ ?ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့စီးပှားရေးလုပျငနျးဆုံးဖွတျခကျြမြားခမြှတျပွီး ?တိုးတကျအောငျမွငျတဲ့ လုပျငနျးဖွဈလာအောငျ အကောငျအထညျဖျောဆောငျရာမှာ ✔️အထောကျအကူပွုနိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။
?တိကမြှုမရှိဘဲ၊ အခြိနျနှငျ့ တပွေးညီ မဟုတျတဲ့ ?ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြားကိုအခွခေံပွီးတော့ စီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခု လုပျကိုငျဖို့ သို့မဟုတျ ရငျးနှီးမွှပျနှံလုပျဖို့ ⛔မဆုံးဖွတျသငျ့ပါဘူး။
?အထူးအရေးကွီးတာကတော့ ?ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ သတငျးအခကျြအလကျမြား ဆိုတာ ?‍?‍?‍?Stakeholders မြားနဲ့ ?Business အတှကျ လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ? ပွဿနာမြားကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့ အတှကျ လိုအပျသော အခကျြအလကျမြားကို ထောကျပံ့ပေးမညျ့ အရာ တဈခုဖွဈပါတယျ။
?ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ ?သတငျး?အခကျြအလကျမြား ဖျောပွဖို့အတှကျ ပထမဦးစှာ လိုအပျသော အခကျြအလကျမြား စုဆောငျးရမှာဖွဈပါတယျ။
အဲ့သညျလိုအပျသော? အခကျြအလကျမြား စုဆောငျးမှတျတမျးတငျခွငျးက အလှနျပဲလှယျကူပါတယျ။
စုဆောငျးထားတဲ့ ?အခကျြအလကျမြားကို တနျဖိုးရှိတဲ့ ?ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ အစီရငျခံစာမြားအဖွဈဖျောပွဖို့အတှကျကတော့ အခြိနျပေးရပါမယျ။
စာရငျးအငျးနဲ့ မရငျးနှီးသူမြား အတှကျ အနညျးငယျခကျခဲ၊ လကျဝငျနိုငျပါတယျ။
အဲ့တာကွောငျ့ စာရငျးပိုငျဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြ ပညာရှငျ သို့မဟုတျ ကှနျပွူတာ စာရငျးကိုငျ စနဈ လိုအပျပါတယျ။
ကှနျပွူတာ စာရငျးကိုငျ စနဈဆိုတာကတော့ ?အခကျြအလကျမြားကို နစေ့ဥျ ထညျ့သှငျးပေးလိုကျတာနဲ့ လိုအပျသော ?ဘဏ်ဍာရေးဆိုငျရာ အစီရငျခံစာမြားကို လှယျကူစှာ ထုတျပေးနိုငျအောငျ ကြှမျးကငျြ ပညာရှငျမြားက စာရငျးအငျးပိုငျးဆိုငျရာ စံနှုနျးမြားနှငျ့ အညီ ကွိုတငျရေးဆှဲထားတာ ဖွဈပါတယျ။
လူကွီးမငျးတို့အနနေဲ့ ဒီလိုစနဈမြိုးကို အသုံးပွုပွီးတော့ အခြိနျတိုအတှငျးမှာ လိုအပျတဲ့ အစီရငျခံစာမြားကို ဖတျရှုနိုငျပွီး လုပျငနျးကို အထောကျအကူပွုနိုငျမညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြားကို လငျြမွနျစှာ လုပျဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
သငျ့မှာ ?‍?စာရငျးပိုငျဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြ ပညာရှငျ ရှိပွီလား။ ကှနျပွူတာ စာရငျးကိုငျစနဈရှိပွီလား။
Accounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Books (Cloud Based Accounting Software) ကိုသုံးကွညျ့လိုကျပါ။
☺️လှယျကူတယျ၊ ရိုးရှငျးတယျ၊⏲️ အခြိနျ၊ ?နရော၊ ?ဒသေမရှေးကနေ အသုံးပွုနိုငျတယျ။
စတငျအသုံးပွုဖို့ အတှကျ ?ရှငျးနှီးမွှပျနှံမှု အမြားကွီးသုံးဖို့မလိုဘူး။
?ကှနျပွူတာ နဲ့ internet connection ရှိတာနဲ့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
အသုံးပွုခအနနေဲ့တော့ လစဥျ ? မွနျမာငှေ ၃၀,၀၀၀ ကပျြ ပဲကသြငျ့ပါတယျ။
မွနျမာငှနေဲ့မို့ Exchange Rate တကျမှာ ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။
သုံးပွီးမှ အဆငျမပွလေို့ ?စိတျညဈစရာမလိုပါဘူး။
အရငျ အသုံးပွုကွညျ့ပွီးမှ ?ကသြငျ့ငှပေေးခရြေမှာဖွဈလို့ မကွိုကျလို့ပွနျမအမျးမှာ?စိတျပူစရာမလိုပါဘူး။
MSME Booksကို ?သုံးဖွဈအောငျသုံးကွညျ့လိုကျပါ။
လူကွီးမငျးတို့ကို ?ကူညီပေးဖို့ Business Centric Network မှ ?‍?ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြားက အဆငျ့သငျ့ စောငျ့ကွိုနပေါတယျ။
သီတငျးကြှတျအထူးPromotion အနနေဲ့ အောကျတိုဘာ (၃၁) ရကျမတိုငျမီ 5️⃣ 0️⃣ ရာခိုငျနှုနျးအထိ Discount ရှိတာမို့ အခုပဲ ဆကျသှယျလိုကျပါ။
?09977160671(viber ကလဲ တဆငျ့လဲ ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။)
Previous postDigital Accountant (Accounting Solutions)